Imenyu eyimfihlo ibonakala "kwindawo echanekileyo" yee-AirTags | Ndisuka mac
Sibona iindaba ezininzi ezinxulumene nezixhobo zendawo entsha ka-Apple, ii-AirTags. Kule meko yinto enomdla kwaye ngokuqinisekileyo ayisiyo menyu ekufuneka sihlale siyibona ukusukela oko yimenyu yophuhliso.
Le menyu ibonakala xa sisebenza ngokuthe ngqo kwindawo yokusebenza kwii-AirTags zethu. Kwi-podcast erekhodwe izolo kunye noogxa kwi-Actualidad iPhone sichaze ukuba indawo ngqo ezi zixhobo zinokungabi zichanekileyo njengoko kulindelwe, kodwa kuluncedo kakhulu ukufumana isixhobo.
Uyenza kanjani le menyu ifihlakeleyo kwii-AirTags
Asazi ukuba izakuthatha ixesha elingakanani iApple ukuyenza ingasebenzi le mowudi okanye ukutshintsha ifomathi yokuyifumana, into esiyaziyo yindlela yokwenza le menyu ifihlakeleyo kwaye yinto nje cinezela kahlanu kwigama le-AirTag xa ikwimowudi yokukhomba. Okwangoku imenyu iyasebenza apho sinokufikelela kolu lwazi lufihliweyo, jonga ukutyekela, kwaye ukhethe phakathi kwe "imo ye-eco" okanye ukonyuse okanye unciphise inani lamanqaku abonisiweyo xa usebenzisa indawo.
Ulwazi olufikelela kwimithombo yeendaba lubhaqiwe njengoko kungenakuba njalo, ukusukela oko Reddit. Xa isixhobo esinjalo sisungulwa Ingabonakala ilula ukuyila, ukuyila, inkqubo, njl. Akukho nto inokuthi iqhubeke nenyaniso njengoko ubona kwiimenyu zolu hlobo ezibonakala ngathi zixabisekile uninzi lwethu olungenalo olona luvo lukude lokuba ziyintoni kwaye ziyintoni ...
Enkosi kumsebenzisi wethu incoko yocingo, UCastizo, wokubamba eli nqaku 😉
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Imenyu eyimfihlo ibonakala "kwindawo echanekileyo" yee-AirTags